काठमाडौं, १७ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफू जोगिन र आफ्नालाई जोगाउन व्यस्त भएको आ’रोप लगाएका छन । देशमा स’लह कि’रा र काेराे’ना भाइ’रसकाे प्रभा’व बढ्दाे भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएकाे उनकाे आ’रोप छ ।
सांसद थापाले सामाजिक संजाल ट्विटरमा टि.भीइत गर्दै लेखेका छन, ‘सरकार चलाउनेहरु जोगिन र आफ्ना जोगाउन व्यस्त छन । तर न त स’लह कि’राले आफ्नो काम रोकेको छ न त कोरो’ना भाइ’रसले ! बरु यिनको त गति र प्रभाव बढ्दो छ ।’
सांसद थापाले कुरा सुन्ने र काम गर्ने सरकार दिन आग्रह पनि गरेका छन । ‘नेकपा सचिवालयलाई विनम्र अनुरोध छ : अति भयो यो तमासा अब हामीलाई कुरा सुन्ने र काम गर्ने सरकार दिनुहोस्।’ बालुवाटारमा हिजो बसेकाे नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा नेकपाभित्रकाे ‘यु’द्धविराम’ भंग भएकाे थियाे ।
उक्त बैठकमा बोल्ने १८ जना सदस्यमध्ये १७ जनाले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजी’नामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकारबाट हटा’उने खेलमा भारत ला’गिपरेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरूको समेत संल’ग्नता रहेको दुई दिनअघि अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसलाई लिएर प्रचण्डले ‘दिल्लीले होइन, मैले मागेको हो राजीनामा’ भनेका थिए ।
बालुवाटारमा तमासा छ!
सरकार चलाउनेहरु जोगिन र आफ्ना जोगाउन व्यस्त छन।तर न त सलह किराले आफ्नो काम रोकेको छ न त कोरोना भाइरसले!बरु यिनको त गति र प्रभाव बढ्दो छ।
त्यसैले नेकपा सचिवालयलाई विनम्र अनुरोध छ:अति भयो यो तमासा अब हामीलाई कुरा सुन्ने र काम गर्ने सरकार दिनुहोस्।
— Gagan Thapa (@thapagk) July 1, 2020
शुल्क बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह